Puntland iyo Galmudug oo madaafiic isku-weydaarsaday Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland iyo Galmudug oo madaafiic isku-weydaarsaday Gaalkacyo
December 23, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, Soomaaliya. [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland iyo Galmudug ayaa saakay oo Jimce ah madaafiic isku-weydaarsaday duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Ilaa iyo hadda, ma jirto cid ku dhimatay madaafiicda la is-weydaarsaday.
Bishii lasoo dhaafay, hoggaamiyaasha Puntland iyo Galmudug ayaa heshiis xabad-joojin ah gaaray kadib dhowr asbuuc oo dagaal culus ka dhacayay magaalada kaasoo ay ku dhinteen tobonaan dad ah ayna ku barakaceen ku dhawaad 90,000.
Gaalkacyo ayaa u qaybsanta labo dhinac, iyadoo dhanka waqooyi ee ugu weyn ay maamusho dowlada Puntland dhanka koonfureedna ay maamulaan maamulka yar ee Galmudug.
Puntland and Galmudug exchange mortar fire in Galkayo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa qabtay keyd hub oo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku lahaayeen duleedka Muqdisho. Saraakiisha ciidamada booliiska ayaa sheegay in keydka hubka laga helay god kuyaala deegaanka Ceelasha Biyaha, oo kuyaala duleedka [...]